जिवेश र रियाशा आरोप-प्रत्यारोप: रियाशा प्रमाण सहित मिडियामा, मलाई आक्रमण गर्ने, मलाई पिट्ने…, जिवेशलाई रियाशाको च्यालेज….(हेर्नुहोस् भिडियो) «
जिवेश र रियाशा आरोप-प्रत्यारोप: रियाशा प्रमाण सहित मिडियामा, मलाई आक्रमण गर्ने, मलाई पिट्ने…, जिवेशलाई रियाशाको च्यालेज….(हेर्नुहोस् भिडियो)
Published : 22 March, 2020 2:49 pm
यूट्यूवमा छोटा कमेडी भिडियो अपलोड गरेर चर्चामा आएको जोडी हो जिवेशसि‌ंह गुरुङ-रियाशा दाहाल । ‘कलेज नेपाल’मार्फत उत्पादित सर्ट भिडियो सिरिज ‘आजकालको लभ’ मा यो जोडीलाई धेरैले मन पराएका थिए । तर, तीन महिनाअघि उनीहरु अनायास अलग भए ।
‘लभ आजकाल’ को १०४ एपिसोडपछि रियाशा र जिवेशको जोडी टुटेको थियो । जिवेशका यो सिरिजका निर्देशक, लेखक र प्रमुख कलाकार हुन् भने रियाशाले उनको जोडी भएर अभिनय गरिरहेकी थिइन् । धेरैले यो जोडीलाई ‘रियल कपल’का रुपमा पनि चर्चा गर्न थालेका थिए । तर, एकाएक अलग भएपछि उनीहरुका शुभचिन्तक निराश बने ।
यद्यपि, यी दुईको भित्री झगडा बाहिर आएको थिएन । दुवैले सामाजिक सञ्जालमा वा मिडियामा एक-अर्काका विषयमा केही पनि बोलेनन् । जिवेशसँग अलग भएर रियाशाले कलेज नेपालमार्फत नै ‘सोल्टिनी’ नाममा छुट्टै कमेडी सिरिज निर्माण गर्न थालिन् । रियाशा प्रमाण सहित मिडियामा, मलाई आक्रमण गर्ने, मलाई पिट्ने…, जिवेशलाई रियाशाको च्यालेज….हेर्नुहोस् भिडियो…
३ दिनपछि पर्दाफास भयो आकाशबाट खस्यो चम्किलो वस्तुको ! प्रत्यदर्शीले दिए डरलाग्दो बयान…..(भिडियो सहित)
बिहीबार राती आकाशमा देखिएको चम्किलो वस्तु उल्कापिण्ड हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाल एष्ट्रोनोमिकल सोसाइटीका अध्यक्ष
हे भगवान: धनगढीमा पनि भेटिए कोरोना संक्रमित…..(सेयर गरौ)
होसियार : लकडाउन उल्लंघन गर्नु भो ? अब प्रहरीले उपकरणबाटै समात्नेछ…..(भिडियो सहित)
लकडाउन उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले ‘म्यान क्याच डिभाइस’ उपकरण प्रयोगमा ल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा प्रभाषले दिए ४ करोड
कोरोना भाइरसको महामारी विश्वभर फैलिएको छ । भारत सरकारले पनि कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न २१ दिने